Ibsa Amnestii Intarnaashiinal Waa’ee Itiyoophiyaa Baase | OROMOTV
(OROMOTV) Walitti bu’iinsii Tigraay keessaa hammaatee haallii jiru yaaddeessaa ta’aa yeroo dhufee kanatti,Itiyoophiyaan raafama rakkoo mirga namoomaa fi kan gargaarsa dhala namaa keessa jirti jechuun gareen mirga dhala namaaf falmuu Amnestii Intarnaashinaal har’a akeekkachisee jira.
Sadaasa 4 mootummaan Itiyoophiyaa aangoo labsii yeroo hatattamaa kan baasee yoo ta’u kunis mirga dhala namaa kan ugguruu fi walabummaa caasaa seera biyyatti irratti sodaa ta’e jira jedha.
Kana malees sabaa himaa hawaasaa irratti, kanneen maxxanfaman hokkara gosaa kan kakaasanii fi aangawoonni mootummaa siviilonni humnootii AddaBilisummaa Uummata Oromoo (TPLF) fi Waraana Bilisummaa Oromoo irratti meeshaa waraanaa akka kaasan gaafatuu jedha Amnestiin.
Rakkoo gargaarsa dhala namaa hamaa fi rakkoon gama mirga dhala namaa kabajsisuun jiru kan wagga har’a Tigraay keessatti gaggeeffame biyyatti idoo biraattis babal’atee jira jedha.
Haala to’annaan ala ta’a jiru kana dhaabsisuuf aangawoonni mootummaa tarkaanfii jabaa fudhachuu qabu kan jedhu Amnestii Intarnaashinaal, seerrii mirga dhala namaa fi kan gargaarsa dhala namaa ba’an kabajamuu mirkaneessuu qabu jedhee jira.